Home Wararka Qabanqaabada xaflada dhaarinta Xildhibaanada oo hada ka socota Afesyooni
Qabanqaabada xaflada dhaarinta Xildhibaanada oo hada ka socota Afesyooni
Magaalada Muqdisho waxaa hada k socota qabanqaabada munaasabadda dhaarinta xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya, taas oo soo martay is jiid jiid dheer iyo murano soo kala dhexgalay guddiga FEIT iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka.
Munaasabadda ayaa lagu wadaa in goordhow ay ka bilaabato Teendhada Afisyooni, halkaas oo ay isugu tegi doonaan xildhibaanada cusub. Ammaanka ayaa aad loo adkeeyey, iyada oo la xiray dhammaan waddooyinka gala Dugsiga Tababarka Booliska Janaral Kaahiye illaa iyo Afisyooni oo la dhigay ciidamo dheeraad ah.
Illaa iyo hadda waxaa shahaadada qaatay in ka badan 200 oo xildhibaan, kuwaas oo si wadajir ah loogu dhaarinayo baarlamaanka 11-aad ee dalka. Sidoo kale waxaa xal laga gaaray tabashadii Koonfur Galbeed, kadib markii guddiga FEIT uu fasaxay kuraastii laga hakiyey maamulkaasi, waxaana xildhibaanada kasoo baxay Koonfur Galbeed ay qayb ka noqon doonaan dhaarinta.
Ra’iisul wasaare Rooble iyo FEIT oo garab ka helaya Beesha Caalamka ayaa ku adkeystay qabashada munaasabadda dhaarinta xildhibaanada labada aqal, si looga gudbo xaaladda adag ee kala guurka ah.
Previous articleGuudlaawe oo ku adkeysanaya in si shuruud la’aan ah loo fasaxo kursigii Fahad Yaasiin
Next articleMalayshiyaad hubaysan oo la wareegay hoolkii lagu qaban lahaa doorashada degmada Eyl
Mareykanka oo ka hadlay go’aanka Erdogan ee la xiriira in Finland iyo Sweden ay ku biiraan Nato
Al-shabaab oo gacanta ku dhigay Deegaan muhiim ah oo ku yaala...
Madaxweyne Farmaajo oo ku wajahan Dalka Talyaaniga